Sida loo kaabta iPhone 4s Notes on Computer hor inta macruufka 6 Update
> Resource > iPhone > Sida loo kaabta iPhone 4s Notes on Computer hor inta macruufka 6 Update
Maxaad samayn lahayd si kaabta iPhone 4s Notes on Computer hor macruufka 6 Hagaaji?
Qaar ka mid ah dadka isticmaala iPhone ayaa na weydiisatay su'aalaha qaar ka mid ah ka hor inta aysan go'aansan in la gaarsiiyo qalabka ay u macruufka 6: ma suroobi karaa waddo si aad u hesho iPhone ee qoraalada gurmad hor update la warshadeeyey? Ma heli karaa qalab adeeg oo straightly qoraalada iPhone gurmad kombiyuutarka si aan si fudud iyaga ka akhrisan kartaa? Maxaan samayn karaa si looga fogaado in laga badiyay qoraalada iPhone aan dib markii macruufka 6 update?
Tan iyo dadka isticmaala badan ayaa ka werwerayn oo ku saabsan qoraalada laga badiyay ka dib macruufka 6 hagaajinta. Gurmad ah kombiyuutarka waxaa loo baahan yahay ka hor inta casriyayn ah.
Sidee ku saabsan iPhone ah uyiri gurmad qalab si fudud Macdan yaabaa iPhone Qoraalada gurmad Lugood iyo badbaadin on your computer? Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows) waa barnaamij aad u saamaxaaya in ay xiriir gurmad ka Lugood raad raac ah oo iPhone 4s oo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer. Maxaa ka sii fiican, adigoo si fudud u daabacan kartaa ama u guuraan kuwa qoraalada in aad gurmad la barnaamijkan. Tani waa muujinta weyn in Lugood ma laha.
Download version maxkamad free hoos ku qoran oo aad u bilowdaan iPhone uyiri gurmad hor macruufka 6 hagaajinta.
2 Tallaabooyinka loo sameeyo ee kaabta iPhone Notes on your computer ka hor macruufka 6 Hagaaji
Tallaabada 1. Dooro Lugood ee kaabta of Your Device leeg,
Inta aadan gurmad la barnaamijkan, fadlan hubi in aad synced qalab aad la Lugood hore.
Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka, daaqad soo socda lagu keentay in doonaa on your computer, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan gurmad saxda ah qalab aad ka dibna riix "Start Scan".
Fiiro gaar ah: aaladaha Apple in ay leeyihiin Lugood gurmad on your computer doonaa oo dhan waxaa lagu ogaan iyo soo bandhigay by barnaamijkan. Run ahaantii aad dooran kartaa qof aad jeceshahay si ay u sameeyaan gurmad kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh Details of kaabta Lugood iyo Samee gurmad ah akhrin on your computer
Marka scan ka baxayo, waxyaabaha in this gurmad Lugood la tusay doonaa qaybaha, sida waxa soo socda qaab image.
Maadaama aad tahay oo ku saabsan in ay qoraalo iPhone gurmad, waxaad riixi kartaa "Fiiro gaar ah" bidixda inay faahfaahin Falanqeynta qoraalada.
Waxaad dooran kartaa wax kasta oo uyiri aad rabto in aad gurmad ka dibna u sax oo ka dhacay on "Ladnaansho" in gurmad iyo badbaadin on your computer. Waa sahlan loo akhriyi karo oo daabacan kombiyuutarka Dhammaan qoraalada badbaadiyey.
1. Waxaad samayn kartaa raad raac straightly ka dhammaan qalabka macruufka adigoo isticmaalaya TunesGo . Barnaamijkan waxa socon waayo, dhammaan qalabka macruufka in files gurmad ay ka mid yihiin muusiga iyo videos gatay dukaanka Lugood, xiriirada, iyo sidoo kale camera photos kitaabkii duudduubnaa iyo videos.
2. Marka laga reebo ka taageerto kor u iPhone uyiri ku computer, Dr.Fone ee macruufka kaloo sameyn kartaa gurmad noocyo badan oo kale oo files ka iPhone.
3. Marka laga reebo samaynta hayaan iPhone kombiyuutarka ah, feature ugu muhiimsan ee barnaamijkan waa inuu ka soo kabsado files lumay ama la tirtiro ka iPhone / iPad / iPad / iPod taabto.
Sida loo Delete All / Xiriirada nuqul ka Your iPhone
Qaado Controal ee Siri on iPhone: Hel, sahlo, Edit Command iyo Secure Siri
Sida lagu Helo Free Ringtones u iPhone
Sida loo Waraaqda Notes ka iPhone kaabta on Mac
Sida loo View iPhone Xiriirada on Computer
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Photos